Yekutarisa Yekuvaka uye Kushambadzira Yako Nhare Yekushandisa | Martech Zone
Vashandisi vekushandisa nharembozha vanowanzo kubatikana zvakanyanya, verenga zvinyorwa zvakawanda, teerera podcast, tarisa mavhidhiyo, uye batana nevamwe vashandisi. Hazvisi nyore kukudziridza ruzivo rwefoni runoshanda, zvakadaro!
10-Nhanho Yekutarisa Yekuvaka & Kutengesa Yakabudirira App inotsanangudza nzira inodiwa yekuita - nhanho-nhanho-kubva padanho repurogiramu kutanga - kubatsira maapplication kusvika pazere kugona Ichishanda sebhizimusi modhi kune vanogadzira uye vane tariro yekugadzira, iyo infographic inoumbwa neyekutanga manotsi uye mashandiro ekuongorora pamwe nemazano ekubudirira kwakawanda.
Iyo Nhare Yekushandisa Yekutarisa inosanganisira:
Nhare Yekushandisa Sarudzo - zita, chikuva uye nemabatiro aunoita kuburitsa mari nazvo.
Kukwikwidzana Kuongorora - ndiani ari kunze uko, vari kuitei uye vasingaite izvo zvinogona kusiyanisa yako nharembozha?
Setup Webhusaiti - ndekupi kwauchasimudzira kunyorera, kuisa mabhatani evashandisi venhare, kana kuisa meta ruzivo runoratidza app yako
Kuvaka Yako App - ungakwanise sei kugadzirisa dhizaini yemushandisi uye chishandiso uye nekuisanganisa munharaunda?
Mobile App Mushandisi Kuedzwa - kusunungura beta vhezheni kuburikidza nechishandiso senge Kwayedza kuziva bugs, kukumbira mhinduro, uye kuona mashandisiro eapp yako.
App Store Kuita - zvidzitiro zvemukati uye zvemukati zvaunopa padura reapp zvinogona kuita musiyano wakakura mukuti vanhu varegedze kana kwete.
Kushambadzira Vagadziri - Ndeapi mavhidhiyo, matrailer, mifananidzo uye infographics iwe yaunogona kugovera iyo inosimudzira yako mobile application?
Zvemagariro Midhiya Zviitiko - Ini pamwe ndingadai ndakangodaidza kukwidziridzwa uku ndokusanganisa neakagadzirwa, asi iwe unofanirwa kugovana kugona kweapp nguva zhinji pasocial… kwaunotora vashandisi vazhinji.
Press Kit - Mapepanhau anoburitswa, screenshots, nhoroondo yekambani uye zvakanangwa zvinyorwa zvesaiti kuudza kuti yako app yasvika!
Kushambadzira Budget - Wanga uine bhajeti rekuvandudza… ndeipi bhajeti rekushambadzira reapp rako?
Urwu runyorwa rukuru asi matanho maviri ECHITSANZO akashaikwa:
App App Reviews - Kukumbira kuongororwa kubva kune vashandisi vekushandisa nharembozha kwete chete kuchakubatsira kukwidzirisa uye kugadzirisa iyo inotevera vhezheni yeshanduro yako, ichawedzerawo chikumbiro chikuru kumusoro kwenzvimbo yekushandisa nhare.
App Performance - Kuongorora mashandiro ako ekushandisa kuburikidza App Annie, SensorTower, kana AppFigures kuongorora chinzvimbo chako, makwikwi, kuita mari, uye ongororo kiyi yekuvandudza yako nharembozha kuita.
Tags: Anwendung anniemifananidzokuvaka nharembozhachecklistmusika nharembozhaMobile Anwendungmobile app mabhataninharembozha app kuenderananharembozha app kukwikwidza kuongororanharembozha app dhizaininharembozha yekushambadzira bhajetinharembozha app monetizationnharembozha app chikuvanharembozha app yekudhinda kitnharembozha app sdknharembozha app yemagariro kusangananharembozha app chitoro optimizationnharembozha app chitoro mapejinharembozha app zanomobile app mushandisi kuyedzasensortowertestflight